कसरी बन्ने फुड टेक्नोलोजिस्ट - रोजगार - प्रकाशितः चैत्र १३, २०७३ - नारी
खाना पकाउने काम आफैमा एउटा कला हो र विज्ञान पनि । खानामा मरमसलाको प्रयोग कसरी गर्ने, मात्रा कसरी मिलाउने, त्यसलाई कसरी स्वादिष्ट बनाउने ? अधिकांश गृहिणीसँग यसको खास कला हुन्छ । त्यति मात्र होइन खाना कसरी पकाउँदा स्वस्थकर र पोषिलो हुन्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुन्छ ।
अपवादबाहेक धेरैजसो महिला खाना बनाउन रुचि राख्छन् । कतिपयले त घरमै वा सानो उद्योग दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमै खानेकुरा बनाएर बिक्री गरिरहेका छन् । कतिपयले अचार, दालमोड, मिठाईं आदि बनाएर बजारमा पुर्‍याइरहेका छन् । यस्तै काममा रुचि भएकाहरूका निम्ति राम्रो करियर विकल्प हो–फुड टेक्नोलोजी ।
कस्तो छ सम्भावना ?
अहिलेको व्यस्त जीवनमा सहरियाहरू भान्सामा खानाको जोरजाम गर्ने, पकाउने झन्झट लिन चाहँदैनन् । उनीहरू छिटो–छरितो रेडिमेड खानामा अभ्यस्त हुँदैछन् । त्यसैले बजारमा प्रोसेस्ड फुडको माग
बढ्दो क्रममा छ । दैनिक छाक टार्नभन्दा पनि खाजाका रूपमा तयारी खाना खोज्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । पकाउन झन्झट नहुने र समयको पनि बचत हुने भएकाले त्यस्ता परिकारमा उपभोक्ताको स्वाद बस्न थालेको हो । नेपालमा थुप्रै यस्ता कम्पनी छन् जसले तयारी खानेकुरा बनाएर उपभोक्तामाझ पेस गर्छन् । यसरी बजारमा लाने तयारी खाद्यपदार्थ स्वादिलो मात्र भएर पुग्दैन स्वास्थ्यमैत्री एवं पोषिलो पनि हुनु आवश्यक छ । तयारी खाद्यपदार्थलाई कसरी स्वादिलो, स्वस्थकर र पोषिलो बनाउने यसको ज्ञान एवं सीप फुड टेक्नोलोजिस्टमा हुन्छ ।
नेपालमा तयारी खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने ठूला–ठूला कम्पनी छन् । ती कम्पनीलाई यस्तै जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । बजारमा बढ्दो तयारी खाद्यपदार्थको माग र त्यस्ता खाद्यपदार्थ प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरूको संख्या थपिएसँगै फुड टेक्नोलोजीका क्षेत्रमा रोजगारीका प्रशस्त ढोका खुला भएका हुन् ।
अहिले खेतीयोग्य जमिनको अनुपातमा उपभोक्ताको संख्या बढ्दो छ । प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभावले कृषि उत्पादनमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । मागअनुरूप उत्पादन हुन नसकेकाले विषादी तथा रासयनिक मलखादको प्रयोग बढ्दो छ । यही समस्यालाई केही हदसम्म कम गर्न फुड टोक्नोलोजिस्टको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । फुड टोक्नोलोजिस्टले उत्पादित कृषि उपजलाई खाद्यपदार्थका रूपमा कुहिन वा नष्ट हुन नदिई खानयोग्य तुल्याउँछन् । त्यसो त मुलुकको कृषि उपजलाई तयारी खाद्यका रूपमा निर्यात गर्ने काममा पनि फुड टेक्नोलोजिस्टको भूमिका रहन्छ । दूधका परिकारदेखि मासुजन्य पदार्थ, फलफूलसम्मलाई प्रशोधन गरी लामो समयसम्म सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सक्ने बनाइदिन्छन् । त्यसैले यी काममा फुड टोक्नोलोजी एवं प्रोसेस्डका लागि प्रशिक्षित फुड टेक्नोलोजीहरूको महत्व एवं आवश्यकता बढेको छ ।
कसरी बन्ने ?
फुड टेक्नोलोजिस्ट कसरी बन्ने त ? यसका निम्ति प्रयोगात्मक ज्ञानसँगै शैक्षिक ज्ञान पनि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहनेहरूले फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलोजी वा म्याथमेटिक्स विषय लिएर प्लस टु अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । फुड टेक्नोलोजीअन्तर्गत बीएस्सी इन फुड टेक्नोलोजी, बीएस्सी इन फुड न्यूट्रिसियन एण्ड प्रिजरभेसन, विटेक इन फुड इन्जिनियरिङ तथा एमएस्सी इन फुड टोक्नोलोजी आदि कोर्स उपलब्ध छन् ।
फुड टेक्नोलोजी र त्यससँग सम्बन्धित कोर्सअन्तर्गत खाद्यपदार्थलाई उचित तरिकाले भण्डारण गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने तथा फ्रिजिङ गर्ने प्रविधिको जानकारी लिनुपर्छ । यसमा पोषक तत्वको अध्ययन, फल, मासु, वनस्पति वा माछाजस्ता छुट्टाछुट्टै विषय पनि समावेश हुन्छन् । कुनै पनि खाद्यपदार्थको उत्पादन, भण्डारण, परीक्षण, प्याकेजिङ र वितरणसम्मको काम फुड टेक्नोलोजिस्टले गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत मासु, फल, तरकारी, माछा, अन्न, दूध आदि सबै प्रकारका खानेकुरा समावेश हुन्छन् । फुड टेक्नोलोजिस्टको पहिलो काम कच्चापदार्थको परीक्षण, खाद्यपदार्थको गुणस्तर, खानेकुराको परीक्षण, न्यूट्रिसन भ्यालुको जाँचसँग सम्बन्धित हुन्छ । उनीहरूले खाद्यपदार्थको प्रशोधन, संरक्षण एवं त्यसलाई खराब हुनबाट बचाउने प्रविधि अपनाउँछन् ।
फुड टेक्नोलोजिस्ट वैज्ञानिक सोंचको हुनु जरुरी छ । उसलाई टेक्नोलोजी डेभलेपमेन्ट, हेल्थ वा न्यूट्रिसियन आदिमा रुचि हुनुपर्छ । यसका साथै जिम्मेवारी वा समूहमा काम गर्ने गुण हुनुपर्छ । राम्रो कम्युनिकेसन्स स्किल पनि चाहिन्छ ।